Linux Mint 20.1 haisati yasvika nekuti ine zviputi kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Pakati paNovember, Clement Lefebvre yakatanga beta yeiyo inotevera vhezheni yeiyo sisitimu inoshanda iyo yainovandudza. Tichitarisa kumashure munguva, isu tese takafunga kuti yakagadzikana vhezheni ye Linux Mint 20.1 yaizosvika pamberi peKisimusi, nemazuva makumi maviri nemaviri kusvika makumi maviri nemasere, asi zvaive zvisiri. Ini pachangu, ndakatarisa kuseva yeprojekti kakati wandei kuti ndione kana vanga vaisa mifanikiso, asi kwete. Uye tsamba yemwedzi nemwedzi yaZvita atitsanangurira sei.
Chii chingave chikonzero chekunonoka? Parizvino, ini ndinogona kungofunga nezve imwe: matambudziko. Uye ndeyekuti iyo Linux Mint timu yakazivisa kuti vanayo 34 matambudziko akazaruka. Vanoti vazhinji vavo havafanire kudzivirira kuburitswa, asi kuchine zviputi zvavanoda kugadzirisa vasati vaendesa yakagadzikana vhezheni yeLinux Mint 20.1. Zvino mubvunzo ndouyu: uchasvika rinhi?
Hazvizivikanwe kuti Linux Mint 20.1 inosvika riini
Parizvino pane makumi matatu neshanu nyaya dzakavhurika. Mazhinji acho haasi vhezheni vharira, asi kuchine mabhugi atinoda kugadzirisa tisati tapa Linux Mint 34 vhezheni yakagadzikana Ndinoziva ndakabvunzwa kakawanda, asi handikwanise kupa chaiyo zuva rekuburitsa. Hakusi kuti hatidi kukuudza, zvinongova zvekuti hatizive chaizvo kuzadziswa kwacho kuchaitika. Kusvikira yagadzirira, hazviitike, uye kana yagadzirira, hapana chikonzero chekumirira kuzivisa zuva.
Kunyangwe pasina zuva rekuuya kweLinux Mint 20.1, ivo vanosimbisa kuti vane budiriro yekutenderera yemwedzi mitanhatu, iyo inovapa mutinhimira uye imwe pfungwa yekukurumidzira, saka ivo vakatarisana nekuisunungura izvozvi, asi izvo "izvozvi" hazvizivikanwe nguva chaiyo. Pakati pezvinetso, ivo vanotaura kumwe kudzoka muLTS kernel iyo Ubuntu inoshandisa, imwe yeakakomba kuve iyo inobata bata mapaneru. Iyo bhagi haisi kuzogadziriswa chero nguva munguva pfupi nekuti tatova pakati pemwaka weKisimusi. Rimwe dambudziko ravanofanira kubata rakabatana neiyo AMD Ryzen 5 uye Ryzen 7, saka iva nemoyo murefu.
Linux Mint 20.1 ichave yakanyorwa zita rekuti Ulyssa uye inotsigirwa kusvika muna 2025.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Isu takafungidzira izvi: Linux Mint 20.1 haina kusvika nekuti ine zviputi kugadzirisa, uye haina zuva rakarongwa
Zvakanaka, zvakakomba kwazvo, zvisinei nekuti vataura zvakadii, ivo havazove nekuti ini ndakaisa beta kubvira payakabuda uye zvese zviri zvemberi, zero matambudziko. Vachada kuiendesa yakakwenenzverwa uye inoita kunge yakakwana kwandiri, mazuva ekuburitswa eDistros ari bullshit, ivo vese vanofanirwa kubuda kana vagadzirira uye kubuda.